Accueil > Gazetin'ny nosy > Kolikoly : Tale jeneraly maro no nidoboka any am-ponja
Kolikoly : Tale jeneraly maro no nidoboka any am-ponja
Tale Jeneraly sy tale maro niasa tany amin’ny ministera isan-karazany teto Antananarivo no nidoboka eny amponjan’Antanimora tao anatin’ny roa taona izao. Ireo izay tena nikirakira vola nampiasaina amin’ny asam-panjakana no tena tratran’izany toa ny DAF (directeur administratif et financier), tale jeneraly ary ireo antsoina hoe PRMP (Personne responsable du marché public).
Isan’ny voatazona vonjimaika amin’izany ny avy ao amin’ny ministeran’ny atitany, ny ministeran’ny mponina, ny ministeran’ny serasera sy ny kolontsaina, ny ministeran’ny Fanajariana ny tany sy ny asa vaventy, ny ministeran’ny fahasalamana, ary ny ministeran’ny fampianarana. Misy koa mpikirakira vola tao amin’ny kaominina Antananarivo renivohitra ary ny orinasa JIRAMA…
Ny tena voakasika amin’izany moa dia ireo izay niasa tamin’ny fanjakana teo aloha ny ankamaroana.
Marobe izy ireo no voarohirohy amin’ny fanodinkodinana vola sy fananam-panjakana sy fanamparam-pahefana ary ny fanaovana kolikoly isan-karazany amin’izany fahefana nomen’ny fanjakana azy izany. Eo anatrehan’ny fanagadrana azy ireo dia maro ankehitriny ny tale sy ny tale jeneraly ary ny PRMP ireo no mangovitra sy matahotra noho izany. Matahotra ary tena matahotra hoy ny fitenenana. Misy mihitsy aza no sahy milaza izy ireny fa nanenina no niditra nandray io andraikitra io.
Rehefa natao moa ny fanadihadiana mahakasika izany fanenenana izany dia misy antony maromaro. Isan’izany ny fanekena be fahatany ny baiko omen’ny lehibe fa indrindra ny minisitra izay mifehy azy ireny. Io no isan’ny fototry ny kolikoly sy ny risoriso eo anivon’ny ministera tsirairay tao anatin’ny 20 taona teo ho eo izao.
Isan’ny mampihorohoro sy mampatahotra ireo mpiasam-panjakana ireo koa ny tsy fahafehezana ny andraikitra tazoniny. Be dia be no nahatonga izany ka isan’izany ny fanendrena amin’ny alalan’ny akamakama hitazona andraikitra voalaza ireo ka lasa manaonao foana noho ny fitiavam-bola sy voninahitra. Mbola manampy izany koa ny tsy fahafehezana ny andraikitra tazonina. Misy ihany koa ireo izay nanao diplaoma sandoka ka manao ny asa tsy mifanandrify amin’ny fahaizana noratovina.
Misy dia misy koa ny finiavanan’ireo tale sy tale jeneraly ireo hangalatra fotsiny izao ny volam-panjakana satria te hanan-karena tampoka ka dia izao any am-ponja izao no iafarany.
Tsy ireo olona voatanisa eo aloha ireo ihany no nidoboka am-ponja amin’ny kolikoly noho ny fanodinkodinana volam-panjakana ity fa hatramin’ireo lehiben’ny sampan-draharaha izay teo ambany fitantanan’ireo tale ireo. Mbola misy ihany koa no nidoboka am-ponja ireo mpandraharaha izay niaraka nitsikombakomba tamin’izany tamin’ny tsenambaro-panjakana izany.
Maro ny tompon’andraikitra ambony amin’ny asam-panjakana ankehitriny no nidoboka eny amponjan’Antanimora. Raha mitohy izao dia ho feno tale sy tale jeneraly ary lehiben’ny sampandraharaham-panjakana ny fonja eto Madagasikara. Seho izay mbola tsy fahita firy tao anatin’ny taona maro izao fahitana tompon’andraikitra aram-panjakana migadra izao. Hampihena ny kolikoly eto amin’ny firenena izany na dia mbola tsy ampy aza.
Ankoatran’izany rehetra izany nefa dia miandry mafy ny fanadihadiana sy fanasaziana ireo minisitra sy filohan’ny andrimpanjakana voarohirohy amin’ny fanodinkodinana volam-panjakana sy fanaparampahefana ary fanaovana kolikoly avo lenta izao ny vahoaka Malagasy. Raha mbola tsy tanteraka izany dia mbola hisy hatrany ny tsy maty manota.
Iza indray izany ny tale sy tale jeneraly hidoboka any am-ponja ny taona 2021 ho avy tsy ho ela io?